Myanmar: Ny fetiben’ny Thingyan 2007 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2018 4:33 GMT
Mankalaza ny Thingyan araka ny fombany tsirairay ireo bilaogera ao amin'ny tontolon'ny bilaogy ao Myanmar. Bilaogy iombonana natokana ho an'ny Thingyan ho an'ny taona 2007 ny Myanmar Mahar Thingyan 2007, izay natsangan'ny Service+, ary nampiditra mpandray anjara maro, sy nandefa sary tamin'ny aterineto, ary ny vaovao farany momba ny Thingyan ihany koa sy ireo fialamboly.
Vanim-potoana ho an'ny fanaovana asa soa araka ny fomba nentim-paharazana ny Thingyan, hanadiovana ny taona lasa, ary hanombohana ny pejy vaovao amin'ny taona vaovao. Raha mbola mikorana ao amin'ny Manduts ny tanora, ireo zokinjokiny kosa mandinika, manao asa soa, ary mampihatra ny fampianarana bodista any amin'ny monasitera sy ny pagôda. Ao anatin'izany, namoaka lahatsoratra momba ny asa soa isankarazany amin'ny Thingyan izay nandraisan'ny namana iray anjara ny bilaogera Ma Gyi.
Mitondra traikefa sy fahatsiarovana samihafa amin'ny olona samihafa ny Thingyan. Nanazava ny zavatra nahafinaritra azy indrindra tao amin'ny fety Thingyan i Y & G.
Mandritra izany, niresaka momba ireo fiovana izay nanana fiantraikany tamin'ny fomban'ny Thingyan nentim-paharazana sy ny fomba ankalazan'ny tanora izany amin'izao fotoana izao i KSN COMPUTER CENTRE(MDY).
Nanazava ny fahasamihafana misy eo amin'ny fomba fanao Thingyan any an-tanàndehibe, any ambanivohitra, sy ny Thingyan ho an'ireo mpitady ravinahitra any amin'ny firenena any ivelany i Kalosayhtoo, ary niresaka momba ny fotoana tena tiany indrindra mandritra ny fety.
Manome tombontsoa betsaka ho an'ny mpivarotra ihany koa ny Thingyan, satria mandeha miantsena ny olona rehetra hividy akanjo mety tsara amin'ny rano, lamba, lamaody samihafa, manofa fiara, miampy ny fividianana rehetra ilaina mba hanomanana ny sakafo nentim-paharazana amin'ny Thingyan. Iray amin'ireo mpivarotra ireo ilay bilaogera Barnyarbarnyar, izay nampiroborobo tao amin'ny bilaoginy ny hevitra mba hivarotana ny kiendiendy masikita. Hevitra iray, hoy izy, izay mety ahazoana vola sady mankalaza ihany ny Thingyan ao amin'ny fivarotany.
Mozika, dihy, ary filatroana no fitaovana manan-danja amin'ny fetiben'ny Thingyan any Myanmar. Ny akademian'ny dihy samihafa no nandray anjara tamin'ny fankalazana sy nandray anjara tamin'ny fifaninanana dihy nentim-paharazana izay fanao isan-taona. Isan-taona dia misy hira maro noforonina amin'ny Thingyan, ary maro ireo hira klasika teo aloha no haverina indray. Betsaka ny asa sy ny ezaka napetraka tamin'ny fanomanana ity fetibe ity, nanerana ny firenena. Bilaogera maro any Myanmar no nandefa hira nentim-paharazana an-tserasera sy ny sarin'ireo korana. Ao anatin'izany, ilay bilaogera Maydar-wii izay nandefa tamin'ny aterineto ny solfàn'ny gitara ho an'ny hira tiany amin'ny Thingyan, ary naka ny sarin'ny famerenana dihy amin'ny Thingyan tao Mandalay i aclmdy.